FA တို့ကိုစန်းပွင့်အောင်ကူညီပေးမယ့် Tantan! – AsiaApps
FA တို့ကိုစန်းပွင့်အောင်ကူညီပေးမယ့် Tantan!
February 8, 2018 February 8, 2018 WilliamReviewsNo Comment on FA တို့ကိုစန်းပွင့်အောင်ကူညီပေးမယ့် Tantan!
Tantan ဟာတော့ dating application တစ်ခုဖြစ်ပြီး FA တွေကိုစန်းပွင့်အောင်ကူညီပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် FA တွေရဲ့အိပ်မက်ဆိုးကြီးကျရောက်ချိန်ဖြစ်တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက် (သို့) ချစ်သူများနေ့အတွက်ပါ။ Tantan ကိုတော့ Android/IOS Platform နှစ်မျိုးလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ အဆင့်ဆင့်ကိုဆက်လက်ဖော်ပြပါရစေ။
Tantan ကိုစတင်အသုံးပြုဖို့ ဖုန်းနံပါတ် (သို့) Facebook အကောင့် တစ်ခုခုနဲ့ ပထမဉီးဆုံး ချိတ်ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ချိတ်ဆက်ပြီးရင်တော့ ဓာတ်ပုံ၊ ဝါသနာနဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုဆက်လက်ဖြည့်သွားရမှာပါ။ ဓာတ်ပုံကိုပထမဉီးဆုံးမြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် အလန်းဆုံးဖြစ်နေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ အားလုံးဖြည့်ပြီးရင်တော့ Setting ထဲက Location ဖွင့်ရမှာပါ။ ဖော်ပြပါအဆင့်အားလုံးလုပ်ဆောင်ပြီးရင်တော့ Tantan ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
မိတ်ဆွေဟာ ယောင်္ကျားလေးဆိုရင် Tantan ဟာ စကီချောချောလေးတွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးဖြစ်နေရင်တော့ ရုပ်ဖြောင့်ဖြောင့်ဘဲလေးတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ Tantan ဖော်ပြပေးတဲ့လူတွေထဲက မိတ်ဆွေရန်ခုန်သွားတဲ့လူရှိရင် ညာဘက်ကအသည်းပုံလေးကို ဖိနှပ်ရမှာဖြစ်ပြီး ဘာမှမခံစားသွားရဘူးဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘက်က အမှားလေးကိုနှိပ်ပြီးပယ်ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေကလည်း ကြိုက်၊ အခြားတစ်ဖက်ကလည်းကြိုက်တယ်ဆိုတာ ရွေးထားမှသာ Tantan ကချိတ်ဆက်ပေးတာပါ။ အဲ့တာကြောင့် ဓာတ်ပုံရွေးတဲ့နေရာမှာဂရုစိုက်ရမယ်လို့ အပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Tantan ကိုဖန်တီးသူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေများပြားလာစေဖို့ဖြစ်ပြီးTantan ကိုမိတ်ဆက်တဲ့ကျွန်တော့်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့မှာ အတွဲလေးတွေပိုပြီးမြင်ချင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Tantan ကိုအခမဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ FA တွေအနေနဲ့ ၇ ရက်သာလိုတော့တဲ့ ချစ်သူများနေ့အတွက် Tantan ကိုအသုံးပြုပြီးကြိုးစားကြည့်ဖို့အကြံပြုပါရစေ။ အဆင်ပြေသွားရင်လည်း Asiaapps ကိုမမေ့ပါနဲ့ဉီး။ ?
Image Source : Tantan – Chat, Date and Make New Friends
သင့် ရဲ့ iPhone ဖုန်းထဲမှာရှိထားသင့်တဲ့ Wallpaper app နှစ်ခု